DHEGEYSO-Diyaaradihii qaadka oo maanta kadegey Galkacyo Qardho iyo Laascaanood. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Diyaaradihii qaadka oo maanta kadegey Galkacyo Qardho iyo Laascaanood.
Seteembar 6, 2016 4:23 b 0
Galkacyo, Sep 06 2016–Wasiirka duulista hawada Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jangeli ayaa shalay kudhawaaqay inay sikumeel gaar ah u joojiyeen qaadkii imaan jirey Soomaaliya, waxaana arrinkaasi uu noqday mid aan kahirgelin Puntland.
Garoomada diyaaradaha ee Galkacyo, Qardho iyo Laascaanood ayaa maanta waxaa kasoo degey diyaarado xamuul ah oo qaad ka keenay wadanka Kenya, oo aan amarkaasi dheg jalaq usiin.
Maareeyaha garoonka diyaaradaha ee Cabdukllaahi Yuusuf Galkacyo Siciid Cabdiraxmaan Yuusuf, ayaa sheegay in diyaaradda Blue ay maanta qaadkii u keentay sidii caadiga ahayd hadalka Xamarna uusan saamayn kulahayn.
Madaxweynaha Puntland iyo Ku-simaha safiirka Qadar oo kulmay.